Siyaasi Cabdiraxmaan C/shakuur oo ka shifay olole cusub oo ay bilowday Villa Soomaaliya. – Kismaayo24 News Agency
by admin 24th December 2019 0190
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa kashifay olole cusub oo lagu doonayo qodobka 56aad ee sharciga doorashooyinka ee muddo kordhinta ka hadlaya in sidiisa loo daayo, si muddada la kordhinayo ee 6-da bilood ay u hirgasho.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in qorshaha loogu jiro muddo kordhinta ay tahay mid lagu doonayo in haddii dib u dhac ku yimaado doorashada in Madaxweynaha iyo Baarlamaanka loo kordhiyo mudada, haddii doorashada xilligeeda ku dhici weydo.
Waxaa socda olole lagu doonayo in qodobka 56-aad ee sharciga doorashooyinka ee muddo kordhinta ka hadlaya sidiisa loo daayo, laakiin muddada la kordhinayo laga dhigo 6 bilood. Qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa dib-u-dhaca doorashooyinka, waxaana lagu sheegay in Madaxweynaha iyo Baarlamaanka muddada loo kordhiyo, haddii ay doorashadu xilligeeda qabsoomi waydo.
Waxba isma dooriso in lix bilood la cayimo iyo in kale. Muddo kordhinta lixda bilood ayaa lix sano noqon karta.
Xildhibaannada Baarlamaanka qaarkood ee ololaha ugu jira muddo kordhinta waa in ay kalsooni ku qabaan shacabkooda doorashana isku diyaariyaan. Ma aha in dalka qalaalase iyo xasillooni darri siyaasadeed ay abuuraan.
Madaxweynaha iyo been ma sheegayaashiisa waxay ku andacoonayaan in Baarlamaanka uu ka hor taaganyahay doorasho qof iyo cod ah.
Haddaba, haddii Baarlamaanka uu muddo kordhin keeno wuxuu ka dhacayaa indhaha cid walba. Waxaan kula talinaynaa in ay sharciga guddiga keenay meelmariyaan, kana waantoobaan muddo kororsiga.
Haddii guriga aasaaskiisa la dhiso, darbiga iyo daaqadaha la taago, oo saqaf ka ama daboolka kore oo keli ah uu ka dhimmanyahay, ruux kasta oo caqli leh wuu garan karaa in fursad la siiyo dhamaystirka hawsha, waana la isla garan karaa muddada lagu dhamayn karo. Waana sidii la yeelay 2016, laakiin suurgal iyo caqli gal toona maaha in hawl aan weli la billaabin muddo kordhinteeda laga hadlo. Ha la ansaxiyo sharciga, dabadeedna ha laga heshiiyo hannaanka doorashada, iyo sidii loo meel marin lahaa, hawlahana xilligooda ha loo daayo.
Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada rayidka ah, culimada, warbaahinta, aqoonyahanka iyo dhallinyaradu waa in aysan korjoogto ka noqon doodda doorashooyinka la xariirta. Siyaabo kala duwan ayey u cabirri karaan dareenkooda iyo aragtida arrimahan ku aaddan. Waa in aan qaadnaa olole xoog ku leh oo looga soo horjeedo muddo kordhinta.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Aqalka Hoose kulan Casho ah kula qaatay Gabdhaha Kubada koloyga Gobolka oo kusoo guuleestay Tartankii Garoowe (Sawirro)
Tifaftiraha K24 5th January 2017
DEG DEG Madaxweyne Xasan Sheikh oo qatay Go,aan aan laga filanayn ka dib Culaysyo badan.